Markaatoo Moo Agamsa Gubatee? – Welcome to bilisummaa
Guyyaa kaleessaa, 5-6-2015 , sa’aati 8:00 eegalee Finfinneen balaa ibiddaatin waaddamaaf sardamaa ooluun ni yaadatama. Guyyaa 11-1-2015 ammoo Hoteellii Finfinnee keessatti yeroo jalqabaatif ijaarramme ‪#‎XayituHotel‬ kan jedhamu haalumma wal fakkaatun gubateet turee. Garu, Markaatotu gubatee hoo jedhan kana tami Markaaton? Oromoodhaaf Maal taati Markaatoon? Koloneeffatamaa Oromiyaa dura Markaaton ‪#‎Agamsa‬ jedhamteet waammamti . Beekkamtis Oromoota naannoo sanirraa humnaan buqqafamaniin. Oromoonni naannoo Finfinnee turan wareegama guddaa godhanit achirraa buqqa’an malee guyyaa takka akka gabrummaaf hin gabroofamnee seenaan ragaa baha. Mee akka fakkeenyatti hoggantoota bara san wareegan akka armaan gadiitti haa ilaallu.
1.Tufaa Munaa- Hogganaa Caffee Tullamaa
2.Qajeelchaa Dooyyoo-Hagganaa Birbirsaa
3.Guddataa Araddoo-Hogganaa Teessoo
4.Soora Lomee-Hogganaa Boolee Bulbulaa
5.Axalee Jaatani-Hogganaa Kolfee
6.Jamboo Dabalee-Hogganaa Daalatti
7.Shubbuu- Hogganaa Boolee
8.Galatee A.-Hogganaa Jarsaayee
9.Abeebee Tufaa-Hagganaa Ekka
Eeggaa hoggantoota kana fixan boodaa, habashaan warri qomcee maqaawwaan naannoo sani akka armaan gadiitti jijjirtee lafa qabatte.
3.Baddaa Ejersaa-Raas Kaasa Sefer
4.Baaroo Kormaa-Xuqur Ambassa
6.Caffee Aannanii- Meeksikoo
12.Hurufa Roobi-Jaan Meedaa
Hoo kana laalluu Oromoon Finfinnee keessaa yeroo ammaa kanatti hoomaa akka hin qabnee waan ifaaf bilisa ta’ee . Garuu, jabaannee falmannee abbaa biyyumaa keenyaa mirkaneessuu qabnaa ka’aa haa kaanu bakka jirru walitti birmannee.
Tags Agamsa Baaroo Kormaa Baddaa ejersaa Birbirsa Gooroo Calcalii Daalattii Finfinnee Gullallee Hurufa Roobii
Previous GUMACHAA OROMOONIF OMN GOTE 05/06/2015 SAUDI ARABIA NANNOO NANNOO RIYAAD IRRATI GUMACHAN AKKA NAMA HAWATU GODHAME 02:00 AMANTANA
Next Intalti Oromoo takka biyya Su’udii magaalaa Riyaad keessatti benzinia ifitti naqun if ajjeefte
Geerarsa March 03, 2021 1 Adwa and Abyssinia’s Participation in the Scramble for Africa: Has …